डाक्टरको प्रेमकथामा आधारित ‘निदाउके सपनीमा’ सार्वजनिक - falaichanews
डाक्टरको प्रेमकथामा आधारित ‘निदाउके सपनीमा’ सार्वजनिक
रामधुनी । कोरोना महामारीबीच फ्रन्टलाईनमा रहेर बिरामीको सेवा गर्ने दुई डाक्टरको प्रेमकथामा आधारित सांगीतिक भिडियो ‘निदाउके सपनीमा’ सार्वजनिक भएको छ । दशैँको छेकोमा सार्वजनिक भिडियोमा समावेश गीतमा सुगम पोखरेल र कबिता श्रेष्ठको स्वर रहेको छ । रमेश कुमार श्रेष्ठका शब्दमा एलिश कार्कीको संगीत रहेको छ ।
भिडियोको निर्देशन चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले गरेका छन् । सन्तोष भन्छन्, ‘म्यूजिकल लभ स्टोरीमा दुई डाक्टरको लभलाईफलाई देखाउन खोजेको छु । यो गीत कोरोना महामारी बीचमा फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्ने सबैलाई सम्मान स्वरुप समर्पण गरेका हौँ । गीतमा नागरिकको सेवा गर्दै गर्दा कोभिड(१९ को संक्रमण भएपश्चातको कथा देख्न सकिन्छ ।’
लाइसेन्स अनि पेट्रोल विनै चल्ने स्कुटर हेर्नुहोस
लाइसेन्स अनि पेट्रोल विनै चल्ने स्कुटर हेर्नुहोसहामिसंग जोडिनका लागि हाम्रो पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला Falaicha Media Pvt.Ltd Contact No.: +9779842564109Email:thulotv73@gmail.comfalaichanews is leading news portal of East Nepal. visit our website :www.falaichanews.com like our facebook page : https://www.facebook.com/falaichanewsSubscribe our youtube channel.https://www.youtube.com/channel/UCzp6…फलैचा मिडिया प्रालि द्वारा उत्पादित Thulo Tv Nepal च्यानलमा मा भएका कुनै पनि भिडियोहरु कपि डाउनलोड तथा अपलोड गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । हाम्रो लिखित अनुमतिविना भिडियो डाउनलोड गरी युट्युब, फेसबुक वा अन्य ठाउँमा नाफा कमाउने उदेश्यले सार्वजनिक प्रसारण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कार|वाही गरिनेछ ।
Gepostet von Falaichanews am Donnerstag, 22. Oktober 2020
बिरामीको उपचारमै रहँदा कोरोना संक्रमण भएका डाक्टरलाई समाजले गरेको दुर्व्यवहार सम्झँदै निर्देशक सेन भन्छन्, ‘जीवनमा सबैभन्दा नजिक भएको मान्छे चाड पर्वको समयमा कोभिड(१९ बाट संक्रमण हुँदा कसैको मनमा के बितेको होला ! त्यहिँमाथी कोरोना संक्रमणपछि समाजले छिछि दुर दुर गर्ने, हेला भावले हेर्ने गरेको पाईयो । आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उहाँहरुले नै फ्रन्टलाईनमा बसेर बिरामीको उपचार गरिरहनु भएको हुन्छ । उहाँहरुले कोरोना संक्रमित भनेर कसैको अपहेलना गर्नुभएको छैन । उहाँहरुको कामलाई सम्मानस्वरुप यो गीत ल्याएका हौँ ।’